Xiddigii hore ee xulka qaranka Brazil, Pele oo Isbitaal la dhigay. – Cayaaraha dunida
Xiddigii hore ee xulka qaranka Brazil, Pele oo Isbitaal la dhigay.
Xiddigii hore ee xulka qaranka Brazil, Pele ayaa la dhigay Isbitaal ku yaalla dalkiisa kaddib markii uu miir daboolmay horraantii shalay subax.
Pele ayaa lagu waday in uu isbuucan booqasho ku tago Waddanka Ingiriiska, kaddib markii uu casuumaad ka helay Ururka Qorayaasha kubadda cagta, balse 77 jirkan ayaa sii joogi doona Brazil maadaama uu xanuunsanayo.
Weeraryahankii hore ee caalamiga ahaa ayaa lagu tilmaamaa xiddigii ugu fiicnaa ee soo maray kubadda cagta, waxaana haatan dhaqaatiirtu ay eegayaan xaaladdiisa caafimaad.
“Shalay subax waxaa Pele la dhigay Isbitaalka markii uu miirku ka tegay, waxaana uu mari doonaa tijaabooyin badan oo caafimaad, iyadoo dhaqaatiirtuna xaaladdiisa ay la socon doonaan.” Waxaa sidaa lagu yiri warbixin ka soo baxday Qorayaasha kubadda cagta Ingiriiska.
Waxa ay sheegeen Football Writers Association in casuumaad kale ay u diri doonaan Pele, balse haatan barnaamijkoodan uu u socon doono sidii loogu talo galay, iyagoo u rajeeyay caafimaad deg deg ah.
Halyeyga reer Brazil ee Pele ayaa dhaliyey 1,281 gool 1,363 kulan oo uu saftay intii lagu guda jiray 21-kii sano ee uu ku jiray xirfaddiisa, waxaana goolashaas qeyb ka ah 77 gool oo uu u dhaliyey dalkiisa 91 kulan oo uu u saftay.